Permaculture System တှငျ ပါဝငျသော အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျမြား
အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျမြားသညျစနဈ၏စှမျးဆောငျရညျနှငျ့ကုနျထုတျစှမျးအားကိုPermaculture System site design တှငျ အမွဲလိုလို ထညျ့သှငျးမှေးမွူ လရှေိ့ပါတယျ။
တိရိစ်ဆာနျမြား၊ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျမြားနှငျ့ သဘာဝ တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျမြားသညျ ရေ ရှညျတညျတံ့သောဂဟေစနဈ၏အရေးပါသော အစိတျအပိုငျးဖွဈကွပါတယျ..။
သုတသေနပွုခကျြအရ တိရစ်ဆာနျမြားရဲ့ ပါဝငျ မှု နှငျ့ ပံ့ပိုးမှုမရှိပါကဂဟေဗဒေဆိုငျရာ သမာဓိစှမျးအားလြော့နညျးသှားခွငျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ…။
Permaculture System တှငျပါဝငျတဲ့ ပေါငျးပငျပွုပွငျထိနျးသိမျးခွငျး၊ မြိုးစမြေ့ားဖွနျ့ဖွူးခွငျးနှငျ့ပိုးမှားထိနျးသိမျးခွငျး တှေ မှာ တိရိစ်ဆနျ တှေ က အရေးပါလှပါတယျ..။ အပငျ ကွှငျးအပငျကနျြ မြား မှ အာဟာရမြားကို တိရိစ်ဆာနျမြားမှတဆငျ့ အဟာရသံသရာ လညျပတျစတေယျ…ဆိုတာ နားလညျ ထားဘို့လိုအပျပါတယျ။
တိရိစ်ဆာနျမြားစှာကိုနှား၊ ဆိတျ၊ ကွကျ၊ ငနျး ၊ ကွကျဆငျ၊ ယုနျ၊ တိရိစ်ဆာနျမြားကိုမညျသို့အသုံးခနြိုငျသညျကို ပိုမိုတိကသြောရှငျးလငျးခကျြကို Permaculture System မှာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
တခြို့သော သွဂဲနဈ စိုကျပြိုးရေးခွံမြားတှငျ ကွကျမြား ကို အုပျဆောငျးမြား ဖွငျ့ အလှညျ့ကြ လှတျကြောငျး ခွငျးဖွငျ့ မွဆေီလှာ ကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျတတျကွပါသေးတယျ..။
ကွကျတှကေ မွဆေီလှာ ကို ယကျခါ ယကျခါ အစာစား တတျပွီး စှနျ့ ပဈတဲ့အညဈအကွေးက မွဆေီလှာအတှကျ နိုကျတွိုဂငျြ ပါဝငျမှု မွငျ့မားသော မွသွေဇာ တှဖွေညျ့တငျးပေး လရှေိ့ပါတယျ..။
စိုကျပြိုးပငျ တှေ ကို စီမံအုပျခြုပျ ဘို့ မထိခိုကျစတေဲ့ မှေးမွူရေး ဖွဈရနျ ဇုနျ နယျ ခှဲခွား သတျမှတျစီမံရနျ လိုအပျပါတယျ..။
တိရိစ်ဆာနျမြားသညျ အပငျမြားထကျပိုမိုပွီး ဂရုစိုကျမှုကို တောငျးဆိုတတျတာ မို့ နစေ့ဉျ ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျ ရနျတော့ အရေးကွီး လှ ပါတယျ..။
နာမညျ ကြျော သွဂဲနဈ စနဈ ကို စတငျတညျထောငျရာတှငျ ပါဝငျခဲ့သူ Sir Albert Howard “The health of soil, plant, animal and man is one and indivisible.”
ကတော့ ဒီလို ပွောခဲ့ဘူးပါတယျ..။
ရရှေညျ တညျတံ့စတေဲ့ စိုကျပြိုးရေးစနဈ မှာ မွဆေီလှာ ရဲ့ ကနျြးမာရေး ၊ သဈပငျမြား ရဲ့ ကနျြးမာရေး ၊ စားသုံးသူ စိုကျပြိုးသူ တို့ရဲ့ ကနျြးမာရေး နဲ့ အိမျမှေး တိရိစ်ဆာနျ ၊ သဘာဝ အားဖွငျ့ရှိနတေဲ့ သတ်တဝါတိုရဲ့ ကနျြးမာရေးဆိုတာ ခှဲခွား လို့ မရ တဲ့ ကိစ်စရပျတှပေါလို့ သူကဆိုခဲ့တယျ..။
“Mother earth never attempts to farm without livestock”.နောကျသူက ထပျမံဆိုပါတယျ…။ ကြှနျမတို့ရဲ့ မိခငျကမ်ဘာမွေ မှာ စိုကျပြိုးရေး လုပျငနျးဆောငျရှကျဘို့ဆိုရငျ အိမျမှေး တိရိစ်ဆနျ တို့ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍ မပါဝငျပဲမဖွဈနိုငျပါဘူး လို့ လညျးထောကျပွခဲ့ပါတယျ..။
တခြို့သော Permaculture System မှာ Wild Life Animals တှပေါဝငျနထေိုငျနိုငျရနျ အတှကျပါ လုပျဆောငျလရှေိ့ကွပါတယျ..။
ဒီအခနျးကဏ်ဍ မှာ ဆိုရငျ သတ်တဝါတှသောမက ပဲ အငျးဆကျ တှေ ၊သဘာဝ ပိုးမှား တှကေိုခမြှေုနျးနှိမျနငျး မပဈပဲ သူတို့ နထေိုငျနိုငျဘို့ သဘာဝပေါကျပငျတှကေို ပါ စိုကျပြိုး စပေါတယျ..။
အငျးဆကျဆှဲဆောငျသော အရောငျပါတဲ့ ပနျးလှလှတှပှေငျ့တဲ့ ပနျးပငျမြားပါ စိုကျပြိုးကွပါတယျ…။
ဒီနရော မှာ အဲလျဘတျအိုငျးစတိုငျး ရဲ့ အဆိုအမိနျ့တဈခုကိုလညျးကိုးကားကွပါတယျ..။
ကမ်ဘာ ပျေါ မှာ ပြားမြိုးစိတျ ပြောကျကှယျ မယျ ဆိုရငျ လူမြိုးစိတျသညျလညျး နောကျထပျ ၄နှဈသာ အသကျရှငျ ရပျတညျ နိုငျပါလိမျ့မယျ ဆိုတဲ့အယူအဆပါ။
တခြို့ ကလညျး ဒီအဆို ကို မပွောခဲ့ပါဘူး လို့ ပွနျလညျ ညငျးဆိုတဲ့ အဆို အမိနျ့ တှပေျေါထှကျခဲ့ပါသေးတယျ ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈပေါ့နျော … ပြားဆိုတဲ့ သတ်တဝါလေး ကတော့ ကြှနျမတို့ စိုကျပြိုးရေး မှာ အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍ မှာ ရှိနပွေီး ပိုးသတျဆေးသုံး စိုကျပြိုးရေးကတော့ အကြိုးပွုအငျးဆကျတှေ ကို ပိုးသတျဆေး အောကျမှာ ဆုံးရှုံး ပြောကျကှယျ စတော ကတော့ညငျးမရတဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ..။
ပေါငျးသတျဆေး၊ ပိုးသတျဆေး တှကေ မွပေျေါတှငျသာမက မွအေောကျ မှာရှိတဲ့ Soil Bio-diversity ကိုပါ တဈနှဈထကျတဈနှဈ သဆေုံးစလေကျြရှိပါတယျ..။
Micro-organism လို့ ချေါ တဲ့မွေ ထဲ မှာ နထေိုငျတဲ့အလှနျသေးငယျ တဲ့သကျရှိတှေ ပကတိ မကျြစိ နဲ့ မမွငျနိုငျတဲ့ အဏုဇီဝ ပိုးလေးတှကေတော့
လူ တိရိစ်ဆာနျ တို့ နစေ့ဉျ စားသုံးနကွေတဲ့ အစားအစာ ကို အဓိက ဖနျတီးပေးနသေူ တှေ ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍ က သေးလှနျးလို့ မမွငျ နိုငျကွတာအမှနျပါပဲ..။
ထို သဘာဝ သကျရှိ အငျးဆကျ ၊ ကြေးငှကျသာရကာ တို့ ၊အဏုဇီဝ တို့ကို သာ ရှငျသနျ စရေနျ ထိနျးသိမျးပွီး အိမျမှေး တိရိစ်ဆနျ မြားမှေးမွူခွငျးမရှိတဲ့ Permaculture System ကို တော့ သကျသတျလှတျ အခွတေကြ ဥယြာဉျခွံ စိုကျပြိုးရေး( vegan Permaculture ) လို့ ချေါပါတယျ..။
Permaculture System တွင် ပါဝင်သော အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များသည်စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုPermaculture System site design တွင် အမြဲလိုလို ထည့်သွင်းမွေးမြူ လေ့ရှိပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် သဘာဝ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များသည် ရေ ရှည်တည်တံ့သောဂေဟစနစ်၏အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်..။
သုတေသနပြုချက်အရ တိရစ္ဆာန်များရဲ့ ပါဝင် မှု နှင့် ပံ့ပိုးမှုမရှိပါကဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ သမာဓိစွမ်းအားလျော့နည်းသွားခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်…။
Permaculture System တွင်ပါဝင်တဲ့ ပေါင်းပင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မျိုးစေ့များဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပိုးမွှားထိန်းသိမ်းခြင်း တွေ မှာ တိရိစ္ဆန် တွေ က အရေးပါလှပါတယ်..။ အပင် ကြွင်းအပင်ကျန် များ မှ အာဟာရများကို တိရိစ္ဆာန်များမှတဆင့် အဟာရသံသရာ လည်ပတ်စေတယ်…ဆိုတာ နားလည် ထားဘို့လိုအပ်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်များစွာကိုနွား၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ ငန်း ၊ ကြက်ဆင်၊ ယုန်၊ တိရိစ္ဆာန်များကိုမည်သို့အသုံးချနိုင်သည်ကို ပိုမိုတိကျသောရှင်းလင်းချက်ကို Permaculture System မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တချို့သော သြဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးခြံများတွင် ကြက်များ ကို အုပ်ဆောင်းများ ဖြင့် အလှည့်ကျ လွှတ်ကျောင်း ခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာ ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်တတ်ကြပါသေးတယ်..။
ကြက်တွေက မြေဆီလွှာ ကို ယက်ခါ ယက်ခါ အစာစား တတ်ပြီး စွန့် ပစ်တဲ့အညစ်အကြေးက မြေဆီလွှာအတွက် နိုက်တြိုဂျင် ပါဝင်မှု မြင့်မားသော မြေသြဇာ တွေဖြည့်တင်းပေး လေ့ရှိပါတယ်..။
စိုက်ပျိုးပင် တွေ ကို စီမံအုပ်ချုပ် ဘို့ မထိခိုက်စေတဲ့ မွေးမြူရေး ဖြစ်ရန် ဇုန် နယ် ခွဲခြား သတ်မှတ်စီမံရန် လိုအပ်ပါတယ်..။
တိရိစ္ဆာန်များသည် အပင်များထက်ပိုမိုပြီး ဂရုစိုက်မှုကို တောင်းဆိုတတ်တာ မို့ နေ့စဉ် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် ရန်တော့ အရေးကြီး လှ ပါတယ်..။
နာမည် ကျော် သြဂဲနစ် စနစ် ကို စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ Sir Albert Howard “The health of soil, plant, animal and man is one and indivisible.”
ကတော့ ဒီလို ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ရေရှည် တည်တံ့စေတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးစနစ် မှာ မြေဆီလွှာ ရဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ သစ်ပင်များ ရဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ စားသုံးသူ စိုက်ပျိုးသူ တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန် ၊ သဘာဝ အားဖြင့်ရှိနေတဲ့ သတ္တဝါတိုရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုတာ ခွဲခြား လို့ မရ တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေပါလို့ သူကဆိုခဲ့တယ်..။
“Mother earth never attempts to farm without livestock”.နောက်သူက ထပ်မံဆိုပါတယ်…။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိခင်ကမ္ဘာမြေ မှာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဘို့ဆိုရင် အိမ်မွေး တိရိစ္ဆန် တို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မပါဝင်ပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး လို့ လည်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်..။
တချို့သော Permaculture System မှာ Wild Life Animals တွေပါဝင်နေထိုင်နိုင်ရန် အတွက်ပါ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပါတယ်..။
ဒီအခန်းကဏ္ဍ မှာ ဆိုရင် သတ္တဝါတွေသာမက ပဲ အင်းဆက် တွေ ၊သဘာဝ ပိုးမွှား တွေကိုချေမှုန်းနှိမ်နင်း မပစ်ပဲ သူတို့ နေထိုင်နိုင်ဘို့ သဘာဝပေါက်ပင်တွေကို ပါ စိုက်ပျိုး စေပါတယ်..။
အင်းဆက်ဆွဲဆောင်သော အရောင်ပါတဲ့ ပန်းလှလှတွေပွင့်တဲ့ ပန်းပင်များပါ စိုက်ပျိုးကြပါတယ်…။
ဒီနေရာ မှာ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း ရဲ့ အဆိုအမိန့်တစ်ခုကိုလည်းကိုးကားကြပါတယ်..။
ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ ပျားမျိုးစိတ် ပျောက်ကွယ် မယ် ဆိုရင် လူမျိုးစိတ်သည်လည်း နောက်ထပ် ၄နှစ်သာ အသက်ရှင် ရပ်တည် နိုင်ပါလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အယူအဆပါ။
တချို့ ကလည်း ဒီအဆို ကို မပြောခဲ့ပါဘူး လို့ ပြန်လည် ညင်းဆိုတဲ့ အဆို အမိန့် တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် … ပျားဆိုတဲ့ သတ္တဝါလေး ကတော့ ကျွန်မတို့ စိုက်ပျိုးရေး မှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မှာ ရှိနေပြီး ပိုးသတ်ဆေးသုံး စိုက်ပျိုးရေးကတော့ အကျိုးပြုအင်းဆက်တွေ ကို ပိုးသတ်ဆေး အောက်မှာ ဆုံးရှုံး ပျောက်ကွယ် စေတာ ကတော့ညင်းမရတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်..။
ပေါင်းသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး တွေက မြေပေါ်တွင်သာမက မြေအောက် မှာရှိတဲ့ Soil Bio-diversity ကိုပါ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သေဆုံးစေလျက်ရှိပါတယ်..။
Micro-organism လို့ ခေါ် တဲ့မြေ ထဲ မှာ နေထိုင်တဲ့အလွန်သေးငယ် တဲ့သက်ရှိတွေ ပကတိ မျက်စိ နဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အဏုဇီဝ ပိုးလေးတွေကတော့
လူ တိရိစ္ဆာန် တို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေကြတဲ့ အစားအစာ ကို အဓိက ဖန်တီးပေးနေသူ တွေ ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ က သေးလွန်းလို့ မမြင် နိုင်ကြတာအမှန်ပါပဲ..။
ထို သဘာဝ သက်ရှိ အင်းဆက် ၊ ကျေးငှက်သာရကာ တို့ ၊အဏုဇီဝ တို့ကို သာ ရှင်သန် စေရန် ထိန်းသိမ်းပြီး အိမ်မွေး တိရိစ္ဆန် များမွေးမြူခြင်းမရှိတဲ့ Permaculture System ကို တော့ သက်သတ်လွတ် အခြေတကျ ဥယျာဉ်ခြံ စိုက်ပျိုးရေး( vegan Permaculture ) လို့ ခေါ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:02 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Permaculture အခွတေကြ ဥယြာဉျခွံစိုကျပြိုး ခွငျး သညျအသဈတဖနျပွနျလညျထူထောငျသောစနဈမြား ဖနျတီး တညျဆောကျရနျအတှကျ သဘာဝတရား တှငျ မကျြမွငျလလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြား အခွခေံ ထားလရှေိ့ပါတယျ..။
လကျရှိဒိဋ်ဌ အမှနျတရားကို နားလညျ သဘောပေါကျရနျ အသုံးခြ တတျရနျလညျး ညှနျးပွ ပွောဆိုတတျပါတယျ..။
ဒီအကွောငျးကို ရေးတဲ့အခါ ကြှနျမက Wikipedia , Permaculture စာမကျြနှာကိုပဲ အဓိက ထားပွီး ကြောရိုးအဖွဈအခွခေံထားပါတယျ..။ ထိုခေါငျးစဉျမြား အောကျမှာ မှ Ecology ဂဟေဗဒေ ရဲ့ အခွခေံသဘောတရားကို ကိုယျသငျယူထားတာ နဲ့ အခွခေံ ပွီး Google Internet စာမကျြနှာမှ တဆငျ့သတငျးအခကျြအလကျကို ရယူရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
အခုဆိုရငျ ထိုခေါငျးစဉျ အတိုငျးဇုံမြား ခှဲခွားခွငျး အကွောငျး ပွီးဆုံးပွီး People and Permaculture ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျကိုရောကျခဲ့ပါတယျ..။
ဒီနရောမှာ ဂဟေ ဗဒေ သင်ျခနျးစာကနေ ထိုနရောတှေ မှာနထေိုငျ ကကျြစားကွတဲ့လူတှေ ရဲ့ သဘောတရားဆကျစပျနားလညျ ဘို့ သူကပွောပွပါတယျ.။
ဒီစိုကျပြိုးရေး စနဈမှာတော့ ပထမ ဦး ဆုံးအနနေဲ့ ပွညျသူလူထု၏ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုကငျြ့ဝတျကို ပိုမိုအာရုံစိုကျရနျလိုအပျ လှပါတယျ..။
သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြကိုဖကျြဆီး ဖွိုဖကျြတဲ့ စီမံကိနျးမြား ကို သတိထား ရပါမယျ..။ ဒုတိယအနဖွေငျ့ သကျဆိုငျရာဒသ ရဲ့ ယဉျကြေးမှုဓလထေုံ့းစံမြား ကိုထိရောကျစှာအသုံးပွုနိုငျရနျဖွဈ ပွီး သူတို့ရဲ့ မွယော ရှုခငျးမြားကိုမွတျနိုးစှာထိနျးသိမျးတတျပွီး တကျကွှကနျြးမာသနျစှမျးသောလူမြားနှငျ့လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးကိုဖနျတီး ပေးရနျ မှာ အဓိကအခကျြ တှပေဲဖွဈပါတယျ…။
မနကေ့ တော့ Permaculture နဲ့ ပတျသကျတဲ့ စာအုပျ တှေ လိုကျရှာရငျး Peter Bane ဆိုတဲ့ စာရေးသူ တဈယောကျ ရဲ့ Permaculture စာအုပျကလေးက ကြှနျမ လကျထဲရောကျလာပါတယျ..။
ဒီစာအုပျရဲ့ ပထမ စာမကျြနှာကို လှနျလိုကျတယျ ဆိုရငျ ပဲ Scott Russell Sanders ဆိုသူ စာရေးဆရာ (A Conservationist - စာအုပျကိုရေးသားသူ )က ဒီလို ဆိုထားပါတယျ..။
“Peter Bane offersapowerful antidote to what we might call our “ephemeraculture”— the consumerist, oil-dependent, wasteful, and ruinous way of life produced by the marriage of industrialism and capitalism. Inavoice at once practical and visionary, he tells how we can achieve security, practice self-reliance, and revive local economies by shifting toaregenerative form of agriculture, beginning in our own backyards. If you’re hungry for hope, good food, neighborliness, conviviality, and survival skills, here is the book for you.
— Scott Russell Sanders, author of A Conservationist ”
Excerpt From: Peter Bane. “The Permaculture Handbook: Garden Farming for Town and Country.” iBooks.
စကျမှုလုပျငနျးမြားနှငျ့အရငျးရှငျစနဈ၏ပေါငျးစညျးမှု ကွောငျ့ (လကျထပျထိမျးမွားမှု) ကွောငျ့ဖွဈပျေါလာသောစားသုံးခွငျး အဓိက ဝါဒ လကျဝယျကိုငျစှဲသူမြား ၊ တှငျးထှကျ ရနေံအပျေါမှီခို ကာစိုကျပြိုးနမှေု၊ အလှဲသုံးစှဲ ဖွုနျးတီးမှုနှငျ့ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ ပကျြစီးယိုယှငျးစသေောဘဝပုံစံကိုကြှနျမ တို့ရဲ့ “ ယဉျကြေးမှုဓလေ့” ဟုချေါနိုငျသောအရာအား ပီတာဘိနျးကအစှမျးထကျသောတိုကျဖကျြရေးတဈခု အဖွဈ Permaculture စာအုပျကိုရေးခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ..။
တဈခြိနျတညျး မှာပဲ လကျတှကေ့ပြွီးအမွှျောအမွငျရှိ တဲ့ အသံတဈခုဖွငျ့သူဟာ ကြှနျုပျတို့ ရဲ့ ကိုယျပိုငျအိမျနောကျဖေး၊ မွပေိုမွလြှေံမြားမှစတငျကာပွနျလညျထူထောငျသညျ့ စိုကျပြိုးရေးပုံစံသို့ပွောငျးလဲ နိုငျအောငျလမျးညှနျပေးထားပါတယျ..။
တကယျလို့ သငျဟာ အနာဂတျ အတှကျ မေြျှာလငျ့ခကျြ တှေ၊ အရညျအသှေးကောငျးမှနျတဲ့အစားအစာတှေ ၊ကျိုယျ့လိုပဲအိမျနီးခငျြးကောငျးတှေ၊ဟနျဆောငျမှု မပါတဲ့ရငျးနှီး ကြှမျးဝငျခွငျးတှေ ၊ ဘဝရှငျသနျရပျတညျရေးအတှကျ ကြှမျးကငျြခွငျးတှေ ကို တမျးတ ငတျမှတျခဲ့မယျ ဆိုရငျ ဒီ Peter Bane ရဲ့ Permaculture စာအုပျဟာ အကောငျးဆုံးလကျဆောငျပါပဲလို့ အမှာစာ မှာ ရေးသားထောကျခံခဲ့ပါတယျ..။
ဒီအမှာစာမှာပါတဲ့ စကျမှုလုပျငနျးမြားနှငျ့အရငျးရှငျစနဈ၏ပေါငျးစညျးမှု ကွောငျ့ (လကျထပျထိမျးမွားမှု) ကွောငျ့ဖွဈပျေါလာသောစားသုံးခွငျး အဓိက ဝါဒ လှမျးမိုးလာတဲ့ ကြှနျမ တို့ လူ့ဘောငျလာက ကွီးမှာ ကုနျပစ်စညျး မြားမြား ကိုသုံးဆောငျခံစားနိုငျရေးဟာ အန်တိမ ရညျမှနျးခကျြတှေ ဖွဈလာတယျ..။
တဈခြိနျက အိန်ဒိယမှာ သငျကွားပေးတဲ့ ဂန်ဒ်ဓီရဲ့ Simple Living , Minimalism ဆိုတာတှေ
သဘာဝကိုအလေးအမွတျပွုတဲ့ Eco-Concious Shopping ( Eco-friendly Shopping),
ဒသေဖွဈကိုအားပေးပါဆိုတဲ့ Buying Local ဆိုတာတှဟော...
ဒီ Consumerism( စားသုံးခွငျးအဓိကဝါဒ) အောကျမှာ မှေးမှိနျပြောကျကှယျ လာရပါတော့တယျ..။
လူ့အဖှဲ့ အစညျး သညျ ထိုသို့သော ရညျရှယျ ခကျြဖွငျ့ခြီတကျကွတဲ့အခါ...။
လူတို့ဟာ အာဏာ ကိုစှဲ လနျးလာကွပါတယျ..။
မတရားတဲ့ စနဈ တှကေိုကာကှယျ လာကွပါတယျ..။
လူပဘောငျဟာ မောဟကွီးစိုးတဲ့လူ့ဘောငျ ဖွဈကွတယျ..။
Mass Production, Over Production တို့ ဖွငျ့စကျရုံ...အလုပျရုံ တှေ မှာ ခိုငျးစဘေို့ အလုပျသမားမြားဖွဈလာစရေနျ ရညျရှယျပွီး သငျကွားပေးတဲ့ ပညာရေးစနဈတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ..။
ကလေးငယျ တှကေလညျးတီဗီ၊ ကှနျပြူတာ ဂိမျးမြားဖွငျ့သာအခြိနျကုနျ လာကွပွီး လူ့ကငျြ့ဝတျ၊ လူ့သိက်ခာ မြားအကွောငျး မသိကွပါလတေော့..။
ကြှနျမတို့ နထေိုငျပိုငျဆိုငျရာ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ နဲ့ကမ်ဘာမွကွေီး က အကနျ့အသတျရှိပွီး ၊ နထေိုငျကွသော ၊ သုံးစှဲ လုပျကိုငျကွသော လူတို့ရဲ့ လောဘ က ကနျ့အသတျမဲ့လာ တဲ့အခါ ..နောကျဆုံးတနေ့ မှာ ကြှနျမတို့ ရဲ့ စိုပွသောယာ ၊ မွကေမ်ဘာ ကိုလကျလှတျဆုံးရှုံး ကွရပါလိမျ့မယျ..။
ဒါကွောငျ့ မို့ လို့ ကမ်ဘာမွကေို ခဈြခငျစှာ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျလိုတဲ့သူတှဟော ၊အမွှျောအမွငျဉာဏျဖွငျ့ အသိကွီးကွီဉာဏျကွီးကွီး ရှိကွဘို့ လိုပါတယျ..။
ဖှံဖွိုးတိုးတကျမှု ဆိုတာတှကေ လညျးစိတျပိုငျးဆိုငျရာအရညျအသှေး တှကေို သှနျသငျဆုံမ သငျကွားမှု မပါ ပဲနညျးပညာသကျသကျ နှငျ့ ဆောငျရှကျလို့မရတာကို ပိုတိုးပွီး သဘောပေါကျမိပါတယျ..။
Permaculture အခြေတကျ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုး ခြင်း သည်အသစ်တဖန်ပြန်လည်ထူထောင်သောစနစ်များ ဖန်တီး တည်ဆောက်ရန်အတွက် သဘာဝတရား တွင် မျက်မြင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အခြေခံ ထားလေ့ရှိပါတယ်..။
လက်ရှိဒိဋ္ဌ အမှန်တရားကို နားလည် သဘောပေါက်ရန် အသုံးချ တတ်ရန်လည်း ညွှန်းပြ ပြောဆိုတတ်ပါတယ်..။
ဒီအကြောင်းကို ရေးတဲ့အခါ ကျွန်မက Wikipedia , Permaculture စာမျက်နှာကိုပဲ အ
ဓိက ထားပြီး ကျောရိုးအဖြစ်အခြေခံထားပါတယ်..။ ထိုခေါင်းစဉ်များ အောက်မှာ မှ Ecology ဂေဟဗေဒ ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားကို ကိုယ်သင်ယူထားတာ နဲ့ အခြေခံ ပြီး Google Internet စာမျက်နှာမှ တဆင့်သတင်းအချက်အလက်ကို ရယူရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အခုဆိုရင် ထိုခေါင်းစဉ် အတိုင်းဇုံများ ခွဲခြားခြင်း အကြောင်း ပြီးဆုံးပြီး People and Permaculture ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒီနေရာမှာ ဂေဟ ဗေဒ သင်္ခန်းစာကနေ ထိုနေရာတွေ မှာနေထိုင် ကျက်စားကြတဲ့လူတွေ ရဲ့ သဘောတရားဆက်စပ်နားလည် ဘို့ သူကပြောပြပါတယ်.။
ဒီစိုက်ပျိုးရေး စနစ်မှာတော့ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျင့်ဝတ်ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ် လှပါတယ်..။
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဆီး ဖြိုဖျက်တဲ့ စီမံကိန်းများ ကို သတိထား ရပါမယ်..။ ဒုတိယအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒသ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများ ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ် ပြီး သူတို့ရဲ့ မြေယာ ရှုခင်းများကိုမြတ်နိုးစွာထိန်းသိမ်းတတ်ပြီး တက်ကြွကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖန်တီး ပေးရန် မှာ အဓိကအချက် တွေပဲဖြစ်ပါတယ်…။
မနေ့က တော့ Permaculture နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ် တွေ လိုက်ရှာရင်း Peter Bane ဆိုတဲ့ စာရေးသူ တစ်ယောက် ရဲ့ Permaculture စာအုပ်ကလေးက ကျွန်မ လက်ထဲရောက်လာပါတယ်..။
ဒီစာအုပ်ရဲ့ ပထမ စာမျက်နှာကို လှန်လိုက်တယ် ဆိုရင် ပဲ Scott Russell Sanders ဆိုသူ စာရေးဆရာ (A Conservationist - စာအုပ်ကိုရေးသားသူ )က ဒီလို ဆိုထားပါတယ်..။
စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အရင်းရှင်စနစ်၏ပေါင်းစည်းမှု ကြောင့် (လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစားသုံးခြင်း အဓိက ဝါဒ လက်ဝယ်ကိုင်စွဲသူများ ၊ တွင်းထွက် ရေနံအပေါ်မှီခို ကာစိုက်ပျိုးနေမှု၊ အလွဲသုံးစွဲ ဖြုန်းတီးမှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းစေသောဘဝပုံစံကိုကျွန်မ တို့ရဲ့ “ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့” ဟုခေါ်နိုင်သောအရာအား ပီတာဘိန်းကအစွမ်းထက်သောတိုက်ဖျက်ရေးတစ်ခု အဖြစ် Permaculture စာအုပ်ကိုရေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်..။
တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ လက်တွေ့ကျပြီးအမြှော်အမြင်ရှိ တဲ့ အသံတစ်ခုဖြင့်သူဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်နောက်ဖေး၊ မြေပိုမြေလျှံများမှစတင်ကာပြန်လည်ထူထောင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးပုံစံသို့ပြောင်းလဲ နိုင်အောင်လမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်..။
တကယ်လို့ သင်ဟာ အနာဂတ် အတွက် မျှော်လင့်ချက် တွေ၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတွေ ၊ကိုယ့်လိုပဲအိမ်နီးချင်းကောင်းတွေ၊ဟန်ဆောင်မှု မပါတဲ့ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ခြင်းတွေ ၊ ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်ခြင်းတွေ ကို တမ်းတ ငတ်မွတ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒီ Peter Bane ရဲ့ Permaculture စာအုပ်ဟာ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲလို့ အမှာစာ မှာ ရေးသားထောက်ခံခဲ့ပါတယ်..။
ဒီအမှာစာမှာပါတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အရင်းရှင်စနစ်၏ပေါင်းစည်းမှု ကြောင့် (လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစားသုံးခြင်း အဓိက ဝါဒ လွှမ်းမိုးလာတဲ့ ကျွန်မ တို့ လူ့ဘောင်လာက ကြီးမှာ ကုန်ပစ္စည်း များများ ကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ရေးဟာ အန္တိမ ရည်မှန်းချက်တွေ ဖြစ်လာတယ်..။
တစ်ချိန်က အိန္ဒိယမှာ သင်ကြားပေးတဲ့ ဂန္ဒ္ဓီရဲ့ Simple Living , Minimalism ဆိုတာတွေ
သဘာဝကိုအလေးအမြတ်ပြုတဲ့ Eco-Concious Shopping ( Eco-friendly Shopping),
ဒေသဖြစ်ကိုအားပေးပါဆိုတဲ့ Buying Local ဆိုတာတွေဟာ...
ဒီ Consumerism( စားသုံးခြင်းအဓိကဝါဒ) အောက်မှာ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ် လာရပါတော့တယ်..။
လူ့အဖွဲ့ အစည်း သည် ထိုသို့သော ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့်ချီတက်ကြတဲ့အခါ...။
လူတို့ဟာ အာဏာ ကိုစွဲ လန်းလာကြပါတယ်..။
မတရားတဲ့ စနစ် တွေကိုကာကွယ် လာကြပါတယ်..။
လူပဘောင်ဟာ မောဟကြီးစိုးတဲ့လူ့ဘောင် ဖြစ်ကြတယ်..။
Mass Production, Over Production တို့ ဖြင့်စက်ရုံ...အလုပ်ရုံ တွေ မှာ ခိုင်းစေဘို့ အလုပ်သမားများဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး သင်ကြားပေးတဲ့ ပညာရေးစနစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်..။
ကလေးငယ် တွေကလည်းတီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းများဖြင့်သာအချိန်ကုန် လာကြပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်၊ လူ့သိက္ခာ များအကြောင်း မသိကြပါလေတော့..။
ကျွန်မတို့ နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ကမ္ဘာမြေကြီး က အကန့်အသတ်ရှိပြီး ၊ နေထိုင်ကြသော ၊ သုံးစွဲ လုပ်ကိုင်ကြသော လူတို့ရဲ့ လောဘ က ကန့်အသတ်မဲ့လာ တဲ့အခါ ..နောက်ဆုံးတနေ့ မှာ ကျွန်မတို့ ရဲ့ စိုပြေသာယာ ၊ မြေကမ္ဘာ ကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံး ကြရပါလိမ့်မယ်..။
ဒါကြောင့် မို့ လို့ ကမ္ဘာမြေကို ချစ်ခင်စွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိုတဲ့သူတွေဟာ ၊အမြှော်အမြင်ဥာဏ်ဖြင့် အသိကြီးကြီဥာဏ်ကြီးကြီး ရှိကြဘို့ လိုပါတယ်..။
ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုတာတွေက လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေး တွေကို သွန်သင်ဆုံမ သင်ကြားမှု မပါ ပဲနည်းပညာသက်သက် နှင့် ဆောင်ရွက်လို့မရတာကို ပိုတိုးပြီး သဘောပေါက်မိပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:01 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
သွဂဲနဈ စနဈ နဲ့ ခွံတညျခငျြကွသူမြား၊ စိုကျခငျးထောငျခငျြသူမြားက ဂဟေအကြိုးပွု စိုကျပြိုးရေး နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အတှေးအချေါ လုပျဆောငျပုံကငျြ့စဉျ တှကေိုလလေ့ာ ပွီး တဲ့အခါ…။ မေးခှနျးတှေ မေးလရှေိ့ကွပါတယျ..။
အမယျစုံစိုကျရမယျ…။ သခြောလညျးဂရုစိုကျရမယျ..ဆိုတော့ ကယျြကယျြ စိုကျလို့မရတော့ဘူးပေါ့..။ နညျးနညျးပဲ ကဉျြးကဉျြးပဲလုပျလို့ ရတော့မှာ ပေါ့ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ..။
ပွောငျးလဲလာ တဲ့ရာသီ ဥတု ကိုအံတုဘို့၊စိနျချေါလာ တဲ့ စြေးကှကျ တှကေို ရငျဆိုငျဘို့၊ ရှားပါးလာတဲ့ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ မှာ လူသားအရငျးအမွဈ ပွဿနာတှကေိုကြျောလှားဘို့ လို စိုကျပြိုး ဘို့ စဉျးစားလာကွရာ မှ ပျေါထှကျလာတဲ့နညျးစနဈတှေ ဖွဈပါတယျ..။
အခု အပိုငျး (၁၁) မှာကတော့ မိမိစိုကျပြိုးမွကေို ဇုံ ခှဲခွား ပွီး သီးနှံမြားကိုရှေးခယျြ စိုကျပြိုးတာ ပဲဖွဈပါတယျ..။
ဇုနျမြားဟာ အသုံးဝငျမှု ၊လူတို့ပေးနိုငျတဲ့အခြိနျ ၊ တိရိစ်ဆနျ တို့လိုအပျခကျြ စတာ တှကေိုထညျ့သှငျးစဉျးစား ပွီး ဉာဏျပါပါ ခှဲခွား သတျမှတျထားခွငျးပဲဖွဈပါတယျ..။
အိမျ နဲ့ အဆောကျအဦနရေကို ဇုနျနံပါတျ သုည (၀) လို့သတျမှတျမယျ ဆိုရငျ..သူတို့ကို ဇုနျ(၁) မှာ နရောခြ စိုကျပြိုးထားသငျ့ပါတယျ..။
ဇုနျ 0ဖွဈတဲ့ အိမျ, ဒါမှမဟုတျအိမျစငျတာ နရောမှာ လညျး တညျဆောကျတဲ့အခါ စှမျးအငျနှငျ့ရလေိုအပျမှုကိုလြှော့ခြ ဘို့ စီမံ ရပါမယျ..။ နရေောငျခွညျကဲ့သို့စှမျး အငျမြား ၊မိုးရေ သဘာဝအရငျးအမွဈမြားကိုစုဆောငျး အသုံးခြ ဘို့ အစီအမံမြားပါရပါမယျ..။
ယဘေုယအြားဖွငျ့နထေိုငျရနျနှငျ့အလုပျလုပျရနျအတှကျပတျဝနျးကငျြ နဲ့ သဟဇာတဖွဈတဲ့ ရရှေညျတညျတံ့သောပတျဝနျးကငျြကိုဖနျတီးရနျရညျရှယျတာကို အမွဲ သတိရှိနရေပါမယျ..။
ဇုနျ (၁) ကတော့ အိမျ နဲ့အနီးဆုံး နရောဖွဈတဲ့အတှကျ မကွာခဏ သှားလာ ဂရုစိုကျ ရမဲ့ သီးနှံ တှေ စိုကျရမယျ..။ ဥပမာ မကွာခဏရလေောငျးပေါငျးသငျ ၊ အနုစိတျ ဂရုစိုကျပါမှ အဆငျပွေ မဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျစိုကျခငျး မြား ၊ပနျးခငျးမြား ၊ ကိုအိမျ နဲ့ အနီးစပျဆုံးနရောမှာ စိုကျပြိုးရပါမယျ..။
အသီး ဆိုရငျ တောငျ စတျောဘယျရီ လို အသီးခငျးတှေ ၊ အစိမျး ဇကာအုပျမိုး ပွုစုထားတဲ့ ပြိုးခငျး၊ပြိုးခွံ ရှိရပါမယျ..။တီကောငျ မှေးတဲ့ ကနျတှေ ၊မိုးရစေု တဲ့ အိုးတှေ ကနျတှေ ၊မီးဖိုခြောငျ စှနျ့ပဈပစ်စညျး တှကေိုမွဆှေေးလုပျတာ..။ အိမျ ကစှနျ့ပဈ တဲ့ရကေို ပွနျအသုံးခြ တဲ့ စနဈ တှရှေိရပါမယျ..။
ဇုနျ (၂) မှာကတြော့ ပေါငျးသငျဘို့ ကိုငျးဖွတျ ဘို့ လိုတဲ့အခြိနျလောကျကမြှသာ သှားရနျလိုအပျတဲ့ အပငျတှေ စိုကျရပါမယျ..။
မကွာခဏပွုပွငျထိနျးသိမျး ဘို့မလိုအပျသညျ့နှဈရှညျပငျမြားကိုစဉျးစားရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ..။ ကငျပှနျး၊ ဆူးပုတျ ၊ ဆှမျးမှေး ၊ ပေါကျပနျးဖွူ ၊ ဂှေးတောကျ ၊ ဘူးသီး ၊ ကငျးပုံသီး ၊သပှတျသီး ၊ဖရုံသီးမြား၊ ကနျစှနျးဥ ၊အာလူးစသညျဖွငျ့…စိုကျပြိုးလို့ရပါတယျ..။
ဇုနျ (၃) မှာကတော့
အဓိကအသုံးပွုသီးနှံမြား ဖွဈတဲ့ ဆနျစပါးလို ၊ ပွောငျး၊ မွပေဲ၊ နှမျး ၊နကွောစတဲ့ လယျယာသီးနှံ တှေ ကို အိမျ မှာ စားသုံး ဘို့ ၊ ဒသေ တှငျးရောငျးခြ ဘို့ စိုကျ လို့ ရတဲ့ ဇုနျ ပဲဖွဈပါတယျ..။ သူက တဈခါ စိုကျပွီး ပွုပွငျထိနျးသိမျးရတာ အနညျးငယျ လိုအပျတာမို့ ပါ။
ဇုနျ (၄) ကတော့ တိရိစ်ဆနျ အစားအစာ အတှကျ အပငျမြား ၊ လှတျကြောငျးရနျ စားကကျြ ၊ ဒသေ တှငျးကြေးငှကျသာရကာ နထေိုငျကကျြစားဘို့ နရောလေး..။ ထငျးစိုကျခငျးမြား ၊သဈထုတျလုပျရနျ သဈမာ စိုကျခငျးမြား စိုကျပြိုးထားရှိသငျ့ပါတယျ..။
ဇုနျ (၅) မှာကတော့ လူ ကဝငျရောကျစှကျဖကျ မှု မရှိ ပဲ သဘာဝ အတိုငျးတညျရှိနဘေို့ ဂဟေစနဈ ကိုထိနျသိမျးတညျဆောကျတဲ့နရောဖွဈပါတယျ။ ဤဇုနျမှတဈဆငျ့ကြှနျမ တို့ ခွံအတှငျးရှိ အခွားသော ဇုနျမြားကိုကူညီနိုငျသောဘကျတီးရီးယား၊ မှိုနှငျ့အငျးဆကျပိုးမှားမြား၏သဘာဝ ၀ သယံဇာတကိုတညျဆောကျပေးတဲ့ နရော လညျးဖွဈပါတယျ..။
Permaculture (11) ဇုံများခွဲခြားခြင်း
သြဂဲနစ် စနစ် နဲ့ ခြံတည်ချင်ကြသူများ၊ စိုက်ခင်းထောင်ချင်သူများက ဂေဟအကျိုးပြု စိုက်ပျိုးရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအခေါ် လုပ်ဆောင်ပုံကျင့်စဉ် တွေကိုလေ့လာ ပြီး တဲ့အခါ…။ မေးခွန်းတွေ မေးလေ့ရှိကြပါတယ်..။
အမယ်စုံစိုက်ရမယ်…။ သေချာလည်းဂရုစိုက်ရမယ်..ဆိုတော့ ကျယ်ကျယ် စိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့..။ နည်းနည်းပဲ ကျဉ်းကျဉ်းပဲလုပ်လို့ ရတော့မှာ ပေါ့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်..။
ပြောင်းလဲလာ တဲ့ရာသီ ဥတု ကိုအံတုဘို့၊စိန်ခေါ်လာ တဲ့ ဈေးကွက် တွေကို ရင်ဆိုင်ဘို့၊ ရှားပါးလာတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ မှာ လူသားအရင်းအမြစ် ပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားဘို့ လို စိုက်ပျိုး ဘို့ စဉ်းစားလာကြရာ မှ ပေါ်ထွက်လာတဲ့နည်းစနစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်..။
အခု အပိုင်း (၁၁) မှာကတော့ မိမိစိုက်ပျိုးမြေကို ဇုံ ခွဲခြား ပြီး သီးနှံများကိုရွေးချယ် စိုက်ပျိုးတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ဇုန်များဟာ အသုံးဝင်မှု ၊လူတို့ပေးနိုင်တဲ့အချိန် ၊ တိရိစ္ဆန် တို့လိုအပ်ချက် စတာ တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား ပြီး ဥာဏ်ပါပါ ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်..။
အိမ် နဲ့ အဆောက်အဦနေရကို ဇုန်နံပါတ် သုည (၀) လို့သတ်မှတ်မယ် ဆိုရင်..သူတို့ကို ဇုန်(၁) မှာ နေရာချ စိုက်ပျိုးထားသင့်ပါတယ်..။
ဇုန် 0ဖြစ်တဲ့ အိမ်, ဒါမှမဟုတ်အိမ်စင်တာ နေရာမှာ လည်း တည်ဆောက်တဲ့အခါ စွမ်းအင်နှင့်ရေလိုအပ်မှုကိုလျှော့ချ ဘို့ စီမံ ရပါမယ်..။ နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့စွမ်း အင်များ ၊မိုးရေ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်း အသုံးချ ဘို့ အစီအမံများပါရပါမယ်..။
ယေဘုယျအားဖြင့်နေထိုင်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ ရေရှည်တည်တံ့သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်တာကို အမြဲ သတိရှိနေရပါမယ်..။
ဇုန် (၁) ကတော့ အိမ် နဲ့အနီးဆုံး နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာခဏ သွားလာ ဂရုစိုက် ရမဲ့ သီးနှံ တွေ စိုက်ရမယ်..။ ဥပမာ မကြာခဏရေလောင်းပေါင်းသင် ၊ အနုစိတ် ဂရုစိုက်ပါမှ အဆင်ပြေ မဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်း များ ၊ပန်းခင်းများ ၊ ကိုအိမ် နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးနေရာမှာ စိုက်ပျိုးရပါမယ်..။
အသီး ဆိုရင် တောင် စတော်ဘယ်ရီ လို အသီးခင်းတွေ ၊ အစိမ်း ဇကာအုပ်မိုး ပြုစုထားတဲ့ ပျိုးခင်း၊ပျိုးခြံ ရှိရပါမယ်..။တီကောင် မွေးတဲ့ ကန်တွေ ၊မိုးရေစု တဲ့ အိုးတွေ ကန်တွေ ၊မီးဖိုချောင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တွေကိုမြေဆွေးလုပ်တာ..။ အိမ် ကစွန့်ပစ် တဲ့ရေကို ပြန်အသုံးချ တဲ့ စနစ် တွေရှိရပါမယ်..။
ဇုန် (၂) မှာကျတော့ ပေါင်းသင်ဘို့ ကိုင်းဖြတ် ဘို့ လိုတဲ့အချိန်လောက်ကျမှသာ သွားရန်လိုအပ်တဲ့ အပင်တွေ စိုက်ရပါမယ်..။
မကြာခဏပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ဘို့မလိုအပ်သည့်နှစ်ရှည်ပင်များကိုစဉ်းစားရွေးချယ်သင့်ပါတယ်..။ ကင်ပွန်း၊ ဆူးပုတ် ၊ ဆွမ်းမွှေး ၊ ပေါက်ပန်းဖြူ ၊ ဂွေးတောက် ၊ ဘူးသီး ၊ ကင်းပုံသီး ၊သပွတ်သီး ၊ဖရုံသီးများ၊ ကန်စွန်းဥ ၊အာလူးစသည်ဖြင့်…စိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်..။
ဇုန် (၃) မှာကတော့
အဓိကအသုံးပြုသီးနှံများ ဖြစ်တဲ့ ဆန်စပါးလို ၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း ၊နေကြာစတဲ့ လယ်ယာသီးနှံ တွေ ကို အိမ် မှာ စားသုံး ဘို့ ၊ ဒေသ တွင်းရောင်းချ ဘို့ စိုက် လို့ ရတဲ့ ဇုန် ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ သူက တစ်ခါ စိုက်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရတာ အနည်းငယ် လိုအပ်တာမို့ ပါ။
ဇုန် (၄) ကတော့ တိရိစ္ဆန် အစားအစာ အတွက် အပင်များ ၊ လွှတ်ကျောင်းရန် စားကျက် ၊ ဒေသ တွင်းကျေးငှက်သာရကာ နေထိုင်ကျက်စားဘို့ နေရာလေး..။ ထင်းစိုက်ခင်းများ ၊သစ်ထုတ်လုပ်ရန် သစ်မာ စိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးထားရှိသင့်ပါတယ်..။
ဇုန် (၅) မှာကတော့ လူ ကဝင်ရောက်စွက်ဖက် မှု မရှိ ပဲ သဘာဝ အတိုင်းတည်ရှိနေဘို့ ဂေဟစနစ် ကိုထိန်သိမ်းတည်ဆောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဇုန်မှတစ်ဆင့်ကျွန်မ တို့ ခြံအတွင်းရှိ အခြားသော ဇုန်များကိုကူညီနိုင်သောဘက်တီးရီးယား၊ မှိုနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏သဘာဝ ၀ သယံဇာတကိုတည်ဆောက်ပေးတဲ့ နေရာ လည်းဖြစ်ပါတယ်..။
ဆက်လက် ဖေါ် ပြပါမည် ။
ခေတ္တ- မြစ်ဆုံဟိုတယ် မြစ်ကြီးနား
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:58 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
နယျမွစေညျးခွား အကြိုးပှား ( Edge Effect and Ecotone မြားကိုလကျတှအေ့သုံးခခြွငျး
ပွီးခဲ့တဲ့အပိုငျး မှာ ကြှနျမ က Edge Effect အကွောငျး သူ့ ရဲ့အကြိုးကြေးဇူး တှပွေောပွခဲ့ပါတယျ...။
လှယျလှယျ သဘောပေါကျ ခငျြရငျတော့ ကြှနျမတို့ ငှကျပြောသီးကို အဖီးလိုကျဝယျတဲ့အခါ ..အစှနျဆုံး အလုံးတှဟော ပိုဝတယျ သုံးမွှောငျ့ပဲရှိတယျ အတှငျးကအလုံးတှလေို လေးမွှောငျ့မရှိဘူး..။ ပိုခြို ပါတယျ..။ အှနျးမှာ နလေို့ နေ..ရေ..အစာပိုရတဲ့သဘောပါ..။
ဂဟေစနဈ တှအေကွောငျး လလေ့ာ ကွတဲ့ ဂဟေဗဒေပညာရှငျ တှဟော
ဂဟေစနဈ တှေ ကို ပုံသေ ကားကြ မှတျယူလမေ့ရှိ ကွပါ..။
အမွဲရှငျသနျပွောငျးလဲနတေတျတဲ့အရာ တှအေနနေဲ့ ၎င်းငျးတို့ ခငျြး ထိစပျနတေဲ့ နယျနိမိတျ တှေ မှတဆငျ့တဈခါတဈရံ အကွီးအကယျြရှလြေ့ား ပွောငျး လဲ နတေတျတယျ ဆိုတာ သိထားကွပါတယျ..။
ပုံသမေဟုတျ ပှငျ့လငျးသောစနဈ ( Open System) မြားအဖွဈ မသတျမှတျပါကဂဟေစနဈ တှေ ရဲ့ ပွောငျးလဲမှုကိုနားလညျနိုငျမှာ မဟုတျပါ။
နိုကျထရိုဂငျြနှငျ့သွ ဂဲနဈကာဗှနျ တို့ကို အပငျကော တိရိစ်ဆာနျ မြာ ဘုံ ငှကွေေး သဖှယျ သုံး စှဲ ကွတယျ ။ အခငျြးခငျြး လဲလှယျ ကွတယျ ..။ သိုလှောငျ ကွတယျ ..။
ဒါ့အပွငျ သကျရှိတှေ နဲ့ သကျမဲ့တှေ ရပျတညျရာနယျ နမိတျ တှေ မှာ သူတို့ ဘယျလို ကူးပွောငျး ရောကျရှိ သှားကွတယျ ဆိုတာကို ခွရောခံရငျး ဂဟေဗဒေပညာရှငျမြားသညျဂဟေစနဈမြားသညျ တဈခု နဲ့ တဈခု ကှနျယကျလို ခြိတျဆကျ ဆကျစပျနတေယျ ဆိုတာကို သကျသေ ပွသ ခဲ့ကွပါတယျ..။
Source: Bart Johnson, Kristina Hill – “Ecology and Design, Frameworks for Learning”, Island Press, 2002
ဒီသဘောတရားကို လူတှေ စိုကျပြိုးမဲ့ Permaculture စိုကျပြိုးရေး ဒီဇိုငျးအတှကျ Edge Effect ကိုအသုံးပွု ကွပါတယျ..။
ပထမ ဖျေါပွခဲ့တဲ့အတိုငျး ဂဟေ စနဈ တို့ ရဲ့ နယျ စပျ စညျးခွား ဆကျစပျနသေညျ့နရော မြားဟာ ဂဟေစနဈ တဈခု နဲ့ တဈခု ဆကျသှယျမှုလမျးကွောငျးအဖွဈအသုံးခပြွီးထိုနယျနိမိတျမြားသညျမြားစှာအကြိုးဖွဈထှနျး ကွောငျးနားလညျ ပွီး အသုံးခခြဲ့ကွပါတယျ..။
သဘာဝတရား ရဲ့ တညျရှိမှု သကျတမျး တှကေ ကွာရှညျခဲ့ပါပွီ….။
တှရေ့တဲ့ သဘာဝ ဒီဇိုငျးမြား မှာ ဖွောငျ့မတျသောလိုငျးမြားမရှိကွောငျးကြှနျမ တို့သိဘို့ လိုအပျ ပါတယျ..။
ဒါကွောငျ့ အကြိုးဖွဈထှနျးစှာ တညျရှိလကျြရှိတဲ့ သဘာဝ ဒီဇိုငျး တှကေိုလလေ့ာကွညျ့ ကွပါမယျ..။
သဘာဝ မှာ သကျမဲ့အရာဝတ်ထုတှကေို လူတှေ ဖနျတီးထုတျလုပျသလို ထပျတူထပျမြှတူတယျ ဆိုတာ မရှိကွပါဘူး..။
သို့သျောလညျး သကျရှိတှကေ ကတြော့ သူနဲ့ မြိုးတူ ရာကို ထပျတူထပျမြှနီးပါး ထုတျလုပျသလို မှေးဖှားနိုငျကွပါတယျ..။ သကျမဲ့တှကေ မတူကွဘူး..။
မွဈမြားဟာ ရှုခငျးမြားကို ဖွတျ၍ အကှအေ့ကောကျမြားသောလမျးကွောငျးမြားကိုဖွတျသနျးစီးဆငျးစပေါတယျ ။
ဖွောငျ့ဖွောငျ့တနျးတနျးစီးတယျ ဆိုတာ မရှိပါဘူး..။ မွဈ တှကေ ကုနျးတှငျးသို့ထိုးဖောကျ ၀ ငျရောကျမှုပွီး သူတို့ ရဲ့ နရောယူမှု ကွီးမားလာ ပါတယျ..။
အလားတူစှာ ထိုပုံစံမြိုးကိုကြှနျမ တို့အစာကွသေောအစားအစာမှအာဟာရမြား ကိုစုပျယူ ဘို့ အရှညျကိုတိုးခြဲ့ရနျ အူသိမျမြား ရဲ့ ဒီဇိုငျး ဟာ သဘာဝ မှာ ခှခေေါကျလကျြ ရှိပါတယျ..။
သကျရှိဆဲလျမြားအတှငျးရှိ တဲ့ Mitochondria ရဲ့အနားဟာလညျး မဉျြးဖွောငျ့မဟုတျပဲ လှိုငျးတှနျ့သဏ်ဍနျ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ..။
ဒါကွောငျ့မို့ လို့ ကြှနျမ တို့ဟာ ထို သဘောတရားတှကေိုအခွခေံပွီး Biodiversity ကွှယျ ဝ တဲ့ Ecotone ဧရိယာ တိုးစပွေီး Edge Effect ပိုမိုရရှိအောငျ ဒီဇိုငျးကို ဆှဲကွပါတယျ..။
ဥပမာ-ရကေနျတဈကနျကိုတညျဆောကျလြှငျရကေနျအရှယျအစားကိုပွောငျးလဲခွငျးမရှိဘဲ အစှနျး (မွပွေငျ နှငျ့ရမေကျြနှာပွငျ) ထိစပျနသေော Edge ရဲ့ အရှညျကိုနှဈဆတိုးနိုငျပွီး၎င်းငျးသညျပတျ ၀ နျးကငျြရှိထုတျလုပျမှုစှမျးအားကိုနှဈဆလောကျတိုးတကျလာအောငျလုပျလို့ရပါတယျ..။
အောကျပါ ဥပမာတှငျသင်ျခြာတှကျခကျြမှုမြားအရ အခငျြး ၁၁.၃ မီတာ ရှိတဲ့ စကျဝိုငျးအပျေါ အခွခေံပွီး ထို အခငျြး ကိုမပွောငျးလဲ ပဲ ၊ ရကေနျသညျရမေကျြနှာပွငျအတှကျစတုရနျးမီတာ ၁၀၀ ကိုလညျးမပွငျေးလဲပဲ။
မွပွေငျ နဲ့ ရပွေငျ ထိစပျနသေော အစှနျးကို မဉျြး ဖွောငျ့ခွငျးမှလှိုငျးအဖွဈပွောငျးလဲခွငျးအားဖွငျ့ ထုတျလုပျမှု စှမျးအားကောငျး မှနျသော Ecotone Area ထိရောကျသောပတျ ၀ နျးကငျြကိုနှဈဆတိုးနိုငျလာပါတယျ..။
ကြှနျမ တို့ Permaculture
အခွတေကြ ဥယြာဉျ ခွံစိုကျပြိုးရေး ရဲ့ စိုကျပြိုးသညျ့ဘောငျဒီဇိုငျး ရေးဆှဲ ရာမှာ ထို နိယမကိုကငျြ့သုံးနိုငျပါတယျ..။ ဥယြာဉျ ထဲမှာ မဉျြးဖွောငျ့မြားအစား မဉျြးကှေး မြားဖွငျ့ပုံဖျေါခွငျးဖွငျ့ စိုကျပြိုး သညျ့နရောလှတျပိုမြားလာပါတယျ..။
ကြှနျမတို့ 'သော့ခလောကျ ပေါကျ နဲ့ တူ တဲ့ပြိုးဘောငျမြား' ကို သုံး ကာ မဉျြးဖွောငျ့ပြိုးဘောငျ ကနေ လမျးသှယျလိုကျ တဲ့ဒီဇိုငျးပဲဖွဈပါတယျ..။
စိုကျပြိုးသညျ့ ဥယြာဉျ မှာ နရောလှတျနှငျ့အနားမြားကိုတိုးခြဲ့ ထားတာကိုပုံမှာ တှရေ့ပါမယျ..။ အပငျဦးရေ ပိုပွီး ဝငျဆနျ့လာ တာကို လညျးတှရေ့မှာပါ..။
ထို Edge Effect သဘောတရားဟာ Permaculture နောကျကှယျမှအခွခေံနိယာမဖွဈပါတယျ..။
ဥယြာဉျခွံ မြားတှငျသာမက ပဲ Field Crop ယာခငျးထဲမှာ လညျး သီးနှံနှဈမြိုးကိုပွောငျး နဲ့ဂြုံကို အတနျး နဲ့ စိုကျပွီး ပဲပိစပျကို လှိုငျး ကဲ့သို့လိုငျးမြား နဲ့ စိုကျပြိုးနိုငျတာ ဒီနိယမ ရဲ့ အားသာခကျြကိုအသုံးခထြားတာဖွဈပါတယျ..။
နရောအကယျြအဝနျး ကိုလညျးအကြိုးအရှိဆုံး အသုံးခနြိုငျပွီး အပငျမြားကို နရောဒသေတဈခုသို့ပိုမိုထညျ့သှငျး စိုကျပြိုးနိုငျလာပါတယျ..။
ထိုသို့သောစနဈကို Strip Intercropping ဟုလညျး ရညျညှနျးလရှေိ့ပွီး ကောကျပဲသီးနှံမြိုးစုံကို နရောကဉျြးကဉျြးမှာ လိုကျလြောညီထှရှေိတဲ့မြိုးစိတျ တှေ ထညျ့သှငျး စိုကျပြိုးပွီးကှဲပွားခွားနားသော မြိုးစိတျမြားအကွားအပွနျအလှနျဆကျသှယျမှုကို ( ဥပမာ= ပဲ နဲ့ ပွောငျးမှာ အကြိုးရှိပုံမြိုး) အကြိုးရှိစပေါတယျ..။
Edge Effect အတှကျ လိုငျး မြား ကို ပုံစံအမြိုးမြိုးဖွငျ့ ဆှဲ ယူနိုငျပါတယျ..။
ခွံစညျးရိုးအတှကျ Zig Zag ဇီဇတျပုံကလကေိုခံနိုငျရညျရှိစပေါတယျ..။
တောငျစောငျးတဈလြှောကျရှိလမျးမြားကို ကှနျတိုလိုငျးအတိုငျး ဖျေါဆောငျပွီး ကွီးထှားလာသော ဧရိယာမြားကိုထိနျးသိမျး ရမှာပါ။
စိုကျခငျးမြားကို ခရုပတျပုံ လညျး တောငျကုနျးလို မို့မို့မောကျမောကျ အလိမျအကောကျ လညျးဖျေါကွတာ ဒီသဘောတှပေါပဲ..။
ဘာကွောငျ့ ဒီလို တှေ လုပျရတယျ ဆိုတာကတော့ Edge Effect လိုခငျြလို့.... အရညျအသှေးကောအရညျအတှကျ ပါတိုးပှားစခေငျြလို့ ဆိုတာ သိလောကျပွီ ထငျပါတယျ..။
ခတ်ေတ- မှျောဘီ ရကျရှညျ တရားရိပျသာ(ဝါဆိုလပွညျ့နေ့)
နယ်မြေစည်းခြား အကျိုးပွား ( Edge Effect and Ecotone များကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်း
ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း မှာ ကျွန်မ က Edge Effect အကြောင်း သူ့ ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး တွေပြောပြခဲ့ပါတယ်...။
လွယ်လွယ် သဘောပေါက် ချင်ရင်တော့ ကျွန်မတို့ ငှက်ပျောသီးကို အဖီးလိုက်ဝယ်တဲ့အခါ ..အစွန်ဆုံး အလုံးတွေဟာ ပိုဝတယ် သုံးမြှောင့်ပဲရှိတယ် အတွင်းကအလုံးတွေလို လေးမြှောင့်မရှိဘူး..။ ပိုချို ပါတယ်..။ အွန်းမှာ နေလို့ နေ..ရေ..အစာပိုရတဲ့သဘောပါ..။
ဂေဟစနစ် တွေအကြောင်း လေ့လာ ကြတဲ့ ဂေဟဗေဒပညာရှင် တွေဟာ
ဂေဟစနစ် တွေ ကို ပုံသေ ကားကျ မှတ်ယူလေ့မရှိ ကြပါ..။
အမြဲရှင်သန်ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့အရာ တွေအနေနဲ့ ၎င်းတို့ ချင်း ထိစပ်နေတဲ့ နယ်နိမိတ် တွေ မှတဆင့်တစ်ခါတစ်ရံ အကြီးအကျယ်ရွေ့လျား ပြောင်း လဲ နေတတ်တယ် ဆိုတာ သိထားကြပါတယ်..။
ပုံသေမဟုတ် ပွင့်လင်းသောစနစ် ( Open System) များအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါကဂေဟစနစ် တွေ ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကိုနားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်သြ ဂဲနစ်ကာဗွန် တို့ကို အပင်ကော တိရိစ္ဆာန် မျာ ဘုံ ငွေကြေး သဖွယ် သုံး စွဲ ကြတယ် ။ အချင်းချင်း လဲလှယ် ကြတယ် ..။ သိုလှောင် ကြတယ် ..။
ဒါ့အပြင် သက်ရှိတွေ နဲ့ သက်မဲ့တွေ ရပ်တည်ရာနယ် နမိတ် တွေ မှာ သူတို့ ဘယ်လို ကူးပြောင်း ရောက်ရှိ သွားကြတယ် ဆိုတာကို ခြေရာခံရင်း ဂေဟဗေဒပညာရှင်များသည်ဂေဟစနစ်များသည် တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ကွန်ယက်လို ချိတ်ဆက် ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာကို သက်သေ ပြသ ခဲ့ကြပါတယ်..။
ဒီသဘောတရားကို လူတွေ စိုက်ပျိုးမဲ့ Permaculture စိုက်ပျိုးရေး ဒီဇိုင်းအတွက် Edge Effect ကိုအသုံးပြု ကြပါတယ်..။
ပထမ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ဂေဟ စနစ် တို့ ရဲ့ နယ် စပ် စည်းခြား ဆက်စပ်နေသည့်နေရာ များဟာ ဂေဟစနစ် တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးချပြီးထိုနယ်နိမိတ်များသည်များစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်း ကြောင်းနားလည် ပြီး အသုံးချခဲ့ကြပါတယ်..။
သဘာဝတရား ရဲ့ တည်ရှိမှု သက်တမ်း တွေက ကြာရှည်ခဲ့ပါပြီ….။
တွေ့ရတဲ့ သဘာဝ ဒီဇိုင်းများ မှာ ဖြောင့်မတ်သောလိုင်းများမရှိကြောင်းကျွန်မ တို့သိဘို့ လိုအပ် ပါတယ်..။
ဒါကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစွာ တည်ရှိလျက်ရှိတဲ့ သဘာဝ ဒီဇိုင်း တွေကိုလေ့လာကြည့် ကြပါမယ်..။
သဘာဝ မှာ သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို လူတွေ ဖန်တီးထုတ်လုပ်သလို ထပ်တူထပ်မျှတူတယ် ဆိုတာ မရှိကြပါဘူး..။
သို့သော်လည်း သက်ရှိတွေက ကျတော့ သူနဲ့ မျိုးတူ ရာကို ထပ်တူထပ်မျှနီးပါး ထုတ်လုပ်သလို မွေးဖွားနိုင်ကြပါတယ်..။ သက်မဲ့တွေက မတူကြဘူး..။
မြစ်များဟာ ရှုခင်းများကို ဖြတ်၍ အကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြောင်းများကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေပါတယ် ။
ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းစီးတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး..။ မြစ် တွေက ကုန်းတွင်းသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုပြီး သူတို့ ရဲ့ နေရာယူမှု ကြီးမားလာ ပါတယ်..။
အလားတူစွာ ထိုပုံစံမျိုးကျိုကျွန်မ တို့အစာကြေသောအစားအစာမှအာဟာရများ ကိုစုပ်ယူ ဘို့ အရှည်ကိုတိုးချဲ့ရန် အူသိမ်များ ရဲ့ ဒီဇိုင်း ဟာ သဘာဝ မှာ ခွေခေါက်လျက် ရှိပါတယ်..။
သက်ရှိဆဲလ်များအတွင်းရှိ တဲ့ Mitochondria ရဲ့အနားဟာလည်း မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်ပဲ လှိုင်းတွန့်သဏ္ဍန် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့်မို့ လို့ ကျွန်မ တို့ဟာ ထို သဘောတရားတွေကိုအခြေခံပြီး Biodiversity ကြွယ် ဝ တဲ့ Ecotone ဧရိယာ တိုးစေပြီး Edge Effect ပိုမိုရရှိအောင် ဒီဇိုင်းကို ဆွဲကြပါတယ်..။
ဥပမာ-ရေကန်တစ်ကန်ကိုတည်ဆောက်လျှင်ရေကန်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ အစွန်း (မြေပြင် နှင့်ရေမျက်နှာပြင်) ထိစပ်နေသော Edge ရဲ့ အရှည်ကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုနှစ်ဆလောက်တိုးတက်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်..။
အောက်ပါ ဥပမာတွင်သင်္ချာတွက်ချက်မှုများအရ အချင်း ၁၁.၃ မီတာ ရှိတဲ့ စက်ဝိုင်းအပေါ် အခြေခံပြီး ထို အချင်း ကိုမပြောင်းလဲ ပဲ ၊ ရေကန်သည်ရေမျက်နှာပြင်အတွက်စတုရန်းမီတာ ၁၀၀ ကိုလည်းမပြေင်းလဲပဲ။
မြေပြင် နဲ့ ရေပြင် ထိစပ်နေသော အစွန်းကို မျဉ်း ဖြောင့်ခြင်းမှလှိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားကောင်း မွန်သော Ecotone Area ထိရောက်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်လာပါတယ်..။
ကျွန်မ တို့ Permaculture
အခြေတကျ ဥယျာဉ် ခြံစိုက်ပျိုးရေး ရဲ့ စိုက်ပျိုးသည့်ဘောင်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲ ရာမှာ ထို နိယမကိုကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်..။ ဥယျာဉ် ထဲမှာ မျဉ်းဖြောင့်များအစား မျဉ်းကွေး များဖြင့်ပုံဖေါ်ခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုး သည့်နေရာလွတ်ပိုများလာပါတယ်..။
ကျွန်မတို့ 'သော့ခလောက် ပေါက် နဲ့ တူ တဲ့ပျိုးဘောင်များ' ကို သုံး ကာ မျဉ်းဖြောင့်ပျိုးဘောင် ကနေ လမ်းသွယ်လိုက် တဲ့ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်..။
စိုက်ပျိုးသည့် ဥယျာဉ် မှာ နေရာလွတ်နှင့်အနားများကိုတိုးချဲ့ ထားတာကိုပုံမှာ တွေ့ရပါမယ်..။ အပင်ဦးရေ ပိုပြီး ဝင်ဆန့်လာ တာကို လည်းတွေ့ရမှာပါ..။
ထို Edge Effect သဘောတရားဟာ Permaculture နောက်ကွယ်မှအခြေခံနိယာမဖြစ်ပါတယ်..။
ဥယျာဉ်ခြံ များတွင်သာမက ပဲ Field Crop ယာခင်းထဲမှာ လည်း သီးနှံနှစ်မျိုးကိုပြောင်း နဲ့ဂျုံကို အတန်း နဲ့ စိုက်ပြီး ပဲပိစပ်ကို လှိုင်း ကဲ့သို့လိုင်းများ နဲ့ စိုက်ပျိုးနိုင်တာ ဒီနိယမ ရဲ့ အားသာချက်ကိုအသုံးချထားတာဖြစ်ပါတယ်..။
နေရာအကျယ်အဝန်း ကိုလည်းအကျိုးအရှိဆုံး အသုံးချနိုင်ပြီး အပင်များကို နေရာဒေသတစ်ခုသို့ပိုမိုထည့်သွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်လာပါတယ်..။
ထိုသို့သောစနစ်ကို Strip Intercropping ဟုလည်း ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီး ကောက်ပဲသီးနှံမျိုးစုံကို နေရာကျဉ်းကျဉ်းမှာ လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့မျိုးစိတ် တွေ ထည့်သွင်း စိုက်ပျိုးပြီးကွဲပြားခြားနားသော မျိုးစိတ်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို ( ဥပမာ= ပဲ နဲ့ ပြောင်းမှာ အကျိုးရှိပုံမျိုး) အကျိုးရှိစေပါတယ်..။
Edge Effect အတွက် လိုင်း များ ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆွဲ ယူနိုင်ပါတယ်..။
ခြံစည်းရိုးအတွက် Zig Zag ဇီဇတ်ပုံကလေကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပါတယ်..။
တောင်စောင်းတစ်လျှောက်ရှိလမ်းများကို ကွန်တိုလိုင်းအတိုင်း ဖေါ်ဆောင်ပြီး ကြီးထွားလာသော ဧရိယာများကိုထိန်းသိမ်း ရမှာပါ။
စိုက်ခင်းများကို ခရုပတ်ပုံ လည်း တောင်ကုန်းလို မို့မို့မောက်မောက် အလိမ်အကောက် လည်းဖေါ်ကြတာ ဒီသဘောတွေပါပဲ..။
ဘာကြောင့် ဒီလို တွေ လုပ်ရတယ် ဆိုတာကတော့ Edge Effect လိုချင်လို့.... အရည်အသွေးကောအရည်အတွက် ပါတိုးပွားစေချင်လို့ ဆိုတာ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်..။
ခေတ္တ- မှော်ဘီ ရက်ရှည် တရားရိပ်သာ(ဝါဆိုလပြည့်နေ့)
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:56 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:54 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်